Mahadi Guuleed damacu yuu kula tegin tublaan yeelkaa | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Mahadi Guuleed damacu yuu kula tegin tublaan yeelkaa
Marka Aadanahu ay waxii ay ku heshiiyeen iyo dhacdooyinkii dhaqan siyaasadeedka ahaa ee hore u dhacay. Dastuur iyo xeerarka leysla ogol yahay waafaqaan waxay gaaraan himilooyin cad oo ay tiigsanayeen. Balse Siyaasada Soomaaliya ayaa noqotay mid tuugeysi iyo indha adeyg ku dhisan.
Yaanan hore u gudbine aan u soo noqdo mahiimada mowduuceygan, Reysulwasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo dhowaan la Hadalay mid ka mid ah warbaahinta ayaa erayo aan munaasib aheyn kala dul dhacay Gudoomiyaha Aqalka Sare Mudane Abdi Xaashi Cabdulaahi, isaga oo ku tilmaamay mid hogaamiya mucaaradka Dowlada Soomaaliya. Hadii aan miisaan mid mid u saaro labadooda. Waxaa inooga Soo baxaya Waxa ay Tahay Shaqsiyadoodu iyo Qiimaha midkood ugu fadhiyo Umada Soomaaliyeed.
GUDOOMIYE CABDI XAASHI:
Waxuu ka soo Shaqeeyay Xiligii dowladii Milateriga, isagoo soo ahaa dhiirigeliyaha Fanka Soomaaliyeed. Waxuu ahaa 1989kii shaqsigii u bareeray in isagoo Maareeyaha Tiyaatarka Qaranka ah in Madaxweynahii Soomaaliya oo tiyaatarka fadhiya in laga qaado barnaamijkii ay heesahiisa ka mid ahaayeen Land cruiser gado, oo ujeedadu aheyd in odayga Xaalada dhabta aheyd ee dalka ka jirtay loogu sheegayey.
Burburkii dalka waxuu ka mid ahaa dadkii isu taagay samatabixinta Bulshada dhibaateysan. Waxuu qeyb ka ahaa gargaarayashii naftooda u hibeeyey dalkooda marxaladii adkeyd sidii looga gudbin lahaa Shacabka Soomaaliyeed aan marna ka caajisin. Waxaa si weyn loogu xasuustaa howlahii dib u heshiisiineed ee beelahii dirirtu ka dhex socotay uu ka sameeyay. Waxuu ahaa ruug cadaa geed fadhi u ah dib u heshiisiinta Soomaaliyeed, marna kama quusan inuu arko Dowlad Soomaaliyeed oo Qiimo leh. Taasna waa tan uu mar walba u taagan yahay. Marna dalka kama bixin oo wuxuu xanuunka la wadaagayey dadkiisa Soomaaliyeed.
MAHDI GUULEED; Waa Shaqsi dalka aan waqti badan gelin marka laga Reebo in uu Noqday RW kuxigeenka Soomaaliya. Taas ayaana lagu bartay. Walow ay dad yaqaanay ay tilmaameen inuu ka tirsanaa Sirdoonka Itoobiya. Gaar ahaan Qeybta Adisababa. RW kuxigeenkana waxaa la sheegaa in ay Itoobiya door ku laheyd in uu noqdo. Walow ay jirto in uu wax ku soo bartay Dalka Itoobiya mase aha waxbarashadu mid ay xun tahay in Adis wax lagu soo barto. Balse dadka yaqaanaa waxay ku tilmaameen in uu xiligii jaamacada uu Sirdoonka Itoobiya ku biiray.
Waa ayaan daro in Cabdi Xaashi oo Oday Soomaali ay ku faani karto ah in uu erayo qadaf ah oo ay taariikhdu xusi doonto kala kor dhacay Mahdi Guuleed. Waa aragti dhexda ka maran oo ah isagey isku reer yihiine ka hor gee. Waa isku taqraarkii waayahan Bulshada laga dhex waday oo loo soo dhiibay. Si uu dhagax tuur ugu sameeyo maadaama usan laheyn damiir xishooda. Ogow in beri adigoo lagu soo tuuray banaanka lagugu foorin doono. Tub ma heyside dalandool mahdiyow
Abdurashid Abdulle Abikar Deyl
Previous articleSawir saameen badan ku yeeshay Baraha Bulshada
Next articleSuudad in lagu soo dhaweeyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir cumar Finish iyo Magaalada oo Shacabkeeda Dadka Roobka u dhimanayaan maha
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo weerar Afkaa...
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Max’uud ayaa eedeymo culus u jeediyey Taliyaha hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Waxaa uu sheegay...